Eriri optic chandelier restaurant pendant ìhè, hotel pendant ìhè, n'ọnụ ụlọ ogologo pendant ìhè - China KepuAi Photoelectric
Akwụsị emitting Fiber Optic
Akụkụ na-egbukepụ egbukepụ Fiber Optic
Eriri Optic Flower
Crystal End Dabara Adaba
Ngwaahịa na Project Videos
Eriri Optic Flower Oriọna, ime ụlọ mma ngwa anya f ...
Eriri Optic Light Source, illuminator, projector
Eriri optic ìhè Star N'uko Kit Ìhè Car ceilin ...
Eriri optic ọkụ ọdọ mmiri eriri optic cable flooring ...
Eriri optic chandelier restaurant pendant ìhè, na-ekpo ọkụ ...
25W RGBW Ikanam eriri optic mmiri ozuzo ákwà mgbochi nsụda mmiri fibe ...
RGBW ikanam Fiber optic ìhè Star N'uko Kit Ìhè
Ikanam eriri optic kpakpando n'uko kit n'ihi na mgbidi na ceilin ...
Eriri optic chandelier restaurant pendant ìhè, hotel pendant ìhè, n'ọnụ ụlọ ogologo pendant ìhè
FOB Price: US $ 0.018-1.3 / mita
Min.Order ibu: 100m
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 apụta kwa ọnwa
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T, Paypal, West Union, L / C
Free Sample: E Nwere
Dị ka ihe niile anyị na ngwaahịa, ndị ọzọ nha & aghụghọ nwere ike na gị arịrịọ.
Nanị kpọtụrụ anyị na gị chọrọ obosara ma ọ bụ ogologo mgbanwe anyị ga-eziga gị a kwuru.
Popular ose dị ka ime akara, WiFi njikwa ma ọ bụ na agba mgbanwe nwere niile ga-gụnyere na gị onwe gị bespoke chandelier.
Shenzhen Kepuai photoelectric Technology Co., Ltd bụ a na-eduga emeputa na a soplaya nke eriri optic na ikanam ọkụ na usoro ebe ọ bụ na 2008.
Anyị nwere ọtụtụ afọ n'ime ụlọ ọrụ na mgbe nile na-arụ ọrụ na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị prestigious ọkụ emepụta na architects na ụwa.
Na anyị ike imewe na engineering ike na anyị ihere mkpara, anyị nwere ihe onwunwe dị Nlụpụta ihe niile anyị na ngwaahịa na-ụlọ na anyị 20,000 square ụkwụ Longgang district Shenzhen, China, Ọzọkwa, anyị nwere a proformance ụlọ ahịa dị na Huaqiang North maka ahịa 'style atule . Anyị onwe-adabere n'elu dum n'ichepụta usoro bụghị nanị pụtara na anyị nwere ike inye mkpumkpu ụzọ ugboro na iwu karịa anyị asọmpi, ma ọkụ na sistemụ na-na-ahaziri na anyị na ndị ahịa 'kpọmkwem chọrọ.
N'ihi ya, ma ị na-achọ ka dabara si a cha cha na kpakpando mmetụta ọkụ, wụnye a na-egwu mmiri na-agba na-agbanwe agbanwe ọkụ, ma ọ bụ onye ndú a otu-nke-a-ụdị chandelier maka a restaurant anyị nwere ike inye a ngwọta izute gị mkpa.
Anyị bụ ndị a na-eto eto na ndị dị ike otu.
Anyị Nzube: Ịzụlite àgwà na nchekwa ọkụ ndụ.
Elekwasị anya na Market
Focus na-egbo mkpa nke anyị na-eji ọkụ, ndị ahịa na ndị nkesa
Sinụ n'ime ahịa na-ege ntị, na-edebe ihe na-amụta
-enweta a ụwa na-ele
Focus na-egbu ahụ nọ n'ọma ahịa kwa ụbọchị
Nwee insatiably ọchịchọ ịmata
Standard Packaging: katọn igbe.
Packaging maka Chandelier: Osisi igbe.
1, ike anyị na-ahọrọ dị iche iche ụdị nke eriri s na-mbuaha ojiji?
Ee, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla dị iche iche nlereanya na-agwakọta were.
2, nwere ike anyị na-enweta samples?
Ee, welcome na-samples maka ule.
3, Olee otú m pụrụ wụnye eriri optic outdoor landscape light by myself?
E nwere bụ ntụziaka na ihe osise na-abịa ngwongwo, naanị na-eso ya, mfe ma dị mfe iji wụnye.
Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla, biko na-eche free kpaliri m na carrie@szkepuai.com, ma ọ bụ na-akpọ na +86 137 6034 3155.
Previous: 25W RGBW Ikanam eriri optic mmiri ozuzo ákwà mgbochi nsụda mmiri eriri optic ákwà mgbochi
Osote: Eriri optic ọkụ ọdọ mmiri eriri optic cable flooring echichi
ngwa nke eriri Gbasara Anya
ngwa nke ngwa anya eriri
ụgbọ ala n'uko ìhè
n'uko eriri optic
eriri optic n'uko
eriri optic imewe
eriri optic nsọtụ
eriri optic ákwà
eriri optic kit
eriri optic ọkụ
eriri optic ọdọ mmiri ìhè, eriri optic n'uko, eriri optic kpakpando n'uko, ada eriri optic, eriri optic projector
eriri optic price
eriri optic ngwaahịa
eriri optic oru
eriri optic skylight
eriri optic kpakpando n'uko
eriri optic uzo
eriri optic ọkọnọ
eriri optic osisi
eriri Gbasara Anya ngwa
eriri optic n'uko ọkụ
duru optic eriri ìhè
optic eriri ìhè
ngwa anya eriri na-arụ ọrụ
ojiji nke ngwa anya eriri
Twinkle star RGB LED DIY star light ceinling fi...